Armodafinil ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/Armodafinil ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
အပေါ် Posted 09 / 11 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်.
Amodafinil Celphalon ဆေးဝါးကတီထွင်တဲ့ psychostimulant မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပြီးဇွန်လ 15, 2007 အပေါ် FDA ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ (-) - (R ကို) ကို racemic မူးယစ်ဆေး modafinil အတွက်တက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်း၏ -enantiomer Amodafinil အဆိုပါဖြစ်ပါတယ်။ Armodafinil မူးယစ်ဆေး modafinil (Progivil) ၏ isomer ဖြစ်ပါသည်
Armodafinil အမှုန့်, modafinil လိုပဲသုံးအဓိကအသုံးပြုမှုရှိပါတယ်:
•အလွန်အကျွံအိပ်ခြင်းနှင့် narcolepsy ၏ကိစ္စများတွင်နိုးထကိုအားပေးအားမြှောက်
အဆိုပါ Cephalon ကုမ္ပဏီကိုလည်းလိုလားခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကြွရောဂါ, schizophrenia အဖြစ်ထိုကဲ့သို့သောပါကင်ဖွင့်ခြင်းနှင့်ကင်ဆာရောဂါအဖြစ်အခြေအနေများအတွက်အိပ်စက်ခြင်းနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကဲ့သို့သောအခြားနာတာရှည်အခြေအနေများ၏ကုသမှုများအတွက် armodafinil (Nuvigil) အကဲဖြတ်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာနှင့်အတူလေ့လာမှုများလုပ်ဆောင်သွားရန်စီစဉ်နေပါတယ်။
Armodafinil compound မိတ်ဆက်
Armodafinil eugeroidal modafinil (Provigil) ၏တစ်ဦး enantiomeric ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ (- -) - racemic modafinil ၏ enantiomer ဒါဟာသာ (R) တို့ပါဝင်သည်။
မော်လီကျူးပုံသေနည်း: C ကို 15 H ကို 15 NO2S က
CAS-အဘယ်သူမျှမ: ။ 112111 43-0
အဆိုပါ Density: 1.283g / စင်တီမီတာ 3
အနာစိမ်းအချက်: 559.1mmHg မှာ 760oC
အဆိုပါ Flash ကိုအမှတ်: 292oC
အဆိုပါငွေ့ဖိအား: 1.56 ကို C မှာ 12E-25mmHg
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ရောဂါ (OSAS), narcolepsy, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်သမား syndrome ရောဂါနှင့်ဆက်စပ် 18 နှစ်ပေါင်းအသက်ကျော်လူနာအလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်၏ကုသမှုများအတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌အတည်ပြုလိုက်သည်။
အဆိုပါ Armodafinil မှုန့်ရိုးရှင်းသောဖော်ပြချက်
armodafinil များအတွက်အရိပ်အယောင် modafinil ဆင်တူသည်။ အမေရိကန် FDA က narcolepsy, အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ရောဂါနှင့်ပြောင်းကုန်ပြီအလုပ်အိပ်စက်ခြင်းရောဂါ, အယ်လ်ဇိုင်းမား, ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမမှန်များအတွက်ကုသမှုအဖြစ် almodafinil ဝန်ခံသည်။
Amodafinil L-mododafin သည်နှင့် modafinil အတွက်အဓိကတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်-လက်ဝဲနှင့်လက်ယာလက် modafinil အတွက် modafinil ၏ 200 မီလီဂရမ်တစ်ခုချင်းစီကိုထက်ဝက်အဘို့မှတ်ပေမယ့်လက်ျာလက် modafinil4နာရီကိုလောင်သည်စားသုံးမှုကိုလျှော့ချသည်, modafinil2နာရီအဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုယူသောအသွေးအမြင့်မားဆုံးအထွတ်အထိပ်ဖြစ်ပါတယ်4နာရီအတွင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။ 90% သည်အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ်, L-mododa အကောင့်မှာ, လက်ျာလက်ကို attenuation သာ 10% ထွက်ခွာမည်။ စတုတ္ထနာရီပြီးနောက်မိုးတားအဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါဟာ L-mododafin ဖြစ်ပါတယ်။ amodafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကအလွန်ခိုင်မာတယ်။ မိုးတားနိုးနေဖို့ကြိုးစားပါတယ်လျှင်, Amoda အာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်နိုးနေဖို့ပိုပြီးအာရုံစိုနှင့်အလွန်နည်းပါးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိနိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးတွင်က modafinil ကိုအစားထိုးပါလိမ့်မယ်။ Amoda ပလာစမာပရိုတိန်းများအတွက်သုံးဆဆှဖှေဲ့ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်ပလာစမာပရိုတိန်းမှခညျြနှောငျနိုငျသညျ။ ထို့ကြောင့်, အသွေးနှင့်ဦးနှောက်ထဲသို့ဝင်ကြောင်းကို amoda များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအလွန်မြင့်မားသည်။ ဦးနှောက်အဘို့အ Amoda ရဲ့ဆှဖှေဲ့မိုးတား၏သုံးကြိမ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
amodafinil ၏ဝက်ဘဝ 13-15 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနည်းဆုံးဖြစ်ကြသည်။
amodafinil ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အုပ်ချုပ်ရေး, သွေးထဲတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုသီးနှံများကိုပုံမှဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်, ဟောင်းသောအသွေးကိုမူးယစ်ဆေးအာရုံစူးစိုက်မှု attenuated ရသေးသောကွောငျ့, သစ်ကိုမူးယစ်ဆေးတို့၏အသွေးထဲသို့ဝင်ထားပါတယ်, စဉ်ဆက်မပြတ်ဆည်းပူးနေ amodafinil အသွေးသည်မူးယစ်ဆေးအထွတ်အထိပ်၏ဆိုက်ရောက်နှောင့်နှေးပါလိမ့်မယ်။
Armodafinil အလွန်အကျွံထိနမိဒ္ဓမှပင်ဆင်းရဲသူကိုလူနာများတွင်နိုးနိုးကွားကွားတိုးပွားစေပါသည်။ ဒါဟာအချို့ neurotransmitter receptors လွှမ်းမိုးနေဖြင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြုပြင်နှင့်စာနာအာရုံကြောစနစ်လှုံ့ဆော်။ လုပ်ဆောင်ချက်အတိအကျယန္တရား, Modafinil နှင့်ဝသကဲ့သို့, မသိနိုင်ပါဘူး။ စသည်တို့အတွက်, မတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်မဟုတ်α 1 -adrenoceptor အဖြစ်သွယ်ဝိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှု - သို့မဟုတ် dopamine အဲဒီ receptor agonist တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်း၏ pharmacological ပရိုဖိုင်ထဲမှာကနေမတူပေမယ့်နိုးနိုးကွားကွားထိန်းသိမ်းထားဖို့ armodafinil များ၏စွမ်းရည်, စိတ်ကြွဆေး၏ဆင်တူသည်။
အဆိုပါ modafinil ၏နှစ်ခု enantiomers ၏ထက်ဝက်-ဘဝတွေကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေ3တစ်အချက်အားဖြင့်ကွာခြား။ Armodafinil ၏ pharmacokinetics မီလီဂရမ်အကွာအဝေး 50 ဖို့ 400 အတွက်ထိုး-လွတ်လပ်သောနှင့် linear ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါမူးယစ်ဆေးလျှင်မြန်စွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးနှစ်ခုအဓိက metabolites ဖို့အသည်းထဲမှာ metabolised ဖြစ်ပါတယ်။ Armodafinil နှင့်၎င်း၏ metabolites ကျောက်ကပ်မှတဆင့်အများစုပြန်ထွက်သွားသည်နေကြသည်။ ပြင်းထန် Hepatic သို့မဟုတ်ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာမလုံလောက်နှင့်အတူလူနာများတွင်ဆေးထိုးလျှော့ချရပါမည်။
Armomafinil တစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ စျေးကွက်တွင်, စည်းကမ်းအတိုင်း, သတ်မှတ်ချက်တွင် 50 မီလီဂရမ်, 150 မီလီဂရမ်, 200 မီလီဂရမ်ဖြစ်ပါသည်, 250 MG ။ mormalia နှင့်အတူလူတို့အဘို့, သူတို့ကတစ်နေ့လျှင် 150-250 mcg မှာကောက်ယူရပါမည်။
Armodafinil အမှုန့် cytochrome P450 3A4 အားဖြင့် metabolised နှင့်လည်း cytochrome P450 အင်ဇိုင်းမိသားစုအချို့ Subtype ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလှည့်၌တူညီသော cytochrome P450 Subtype တားစီးသို့မဟုတ် metabolize ဖြစ်စေသည့်များစွာသောအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူအပြန်အလှန်များအတွက်အလားအလာရှိပါသည်။ ဤရွေ့ကားပါးစပ် contraceptives, ဖမ်းဆီးရမိမမှန်များ၏ကုသမှုများအတွက်မူးယစ်ဆေး (anticonvulsants), anticoagulants (anticoagulants), စိတ်မကျဆေး Antidepressants ဒါမှမဟုတ် immunosuppressant cyclosporine အထူးသဖြင့်ပါဝင်သည်။
အစီရင်ခံအသုံးအများဆုံးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးခဲ့ကြသည်: ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပျို့, မူးဝြေခင်း, အိပ်ပျော်ခြင်းနှောင့်အယှက်။ Armodafinil ထိုကဲ့သို့သောအဖုသို့မဟုတ်မြက်ပင်အဖျားအဖြစ်ပျော့မတည့်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Stevens-Johnson က syndrome ရောဂါအပါအဝင် racemic ပုံစံ Modafinil နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိသောသူတို့သည်အဖြစ်ပြင်းထန်မတည့်အရေပြားကိုတုံ့ပြန်မှု, ဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းနှင့်ကုသမှုချက်ချင်းပြတ်တောက်မလိုအပ်လျက်ရှိသည်။
1.Armodafinil နှင့် Modafinil နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်နှင့်လူများအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်, narcolepsy သို့မဟုတ်အလွန်အကျွံထိနမိဒ္ဓတက်ကြွစွာဆက်လက်တည်ရှိကိုဆီးတားကူညီ Non-စိတ်ကြွဆေးမူးယစ်ဆေးဝါးများဖြစ်ကြသည်။ ... အစပိုင်းမှာ Modafinil narcolepsy ပြုမူဆက်ဆံမနိုးတိုးတက်စေရန်အသုံးပြုခဲ့သည်
2 ။ Armomafinil / 50 မီလီဂရမ် / 150 / 200 မီလီဂရမ်မောင်မောင် 250 ၏ပုံစံအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ Modafinil သာ 100 / 200 မီလီဂရမ်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
3 ။ Armodafinil ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဘဝသော်လည်း, 15 နာရီ Modafinil အမှုန့် 12 နာရီဖြစ်ပါတယ်။ Modafinil နာရီ 8 မှ6ကြာသော်လည်း Armodafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, 12 နာရီဖြစ်ပါတယ်။
4 ။ Farmafinil အကြာတွင်၎င်း၏အထွတ်အထိပ်အာရုံစူးစိုက်မှုရောက်ရှိ, စနစ်တကျအသုံးပြုနိုင်စွမ်းများအတွက်အကြောင်းပြချက်ရှည်ဖြစ်ပြီး, ကြာချိန်ပိုရှည် Modafinil ထက်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ Armodafinil ၏ 150 မီလီဂရမ်ယူလျှင်အပြင်, Modafinil ၏ 200 မီလီဂရမ်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ရေရှည်ထိရောက်မှုသောကြောင့်, Armodafinil အမှုန့် ကျန်းမာရေးပညာရှင်များသူတို့နှစ်ဦးစလုံးနှင့်ဆင်တူဖြစ်ကြောင်းဆိုသညျကား, ထိုရလဒ်များသည်မကြာခဏအတူတူပါပဲဖြစ်သော်လည်းနှစ်ခုရဲ့အကောင်းဆုံးစဉ်းစားသည်။
ဆေး၏အသုံးပြုမှုအပေါ်ဆုံးဖြတ်ပါက အသုံးပြု. ၏အကျိုးကျေးဇူးများအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ထက်ပိုဖြစ်သင့်သည်, သင်နှင့်သင်၏ဆရာဝန်ဆေးသို့မဟုတ်မသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
လုံလောက်သောလေ့လာမှုများအသက် 17 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်ကလေးများအပေါ် armodafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ကောက်ယူကြပြီမဟုတ်။ ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏လုံခြုံမှုနှင့်ထိရောက်မှုသေးထူထောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အဘယ်သူမျှမလေ့လာမှုများအသက်အရွယ်နှင့်အထက်ကလူအပေါ် armodafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားဆက်ဆံရေးအပေါ်ကောက်ယူခဲ့ကြပေမဲ့လည်းအိုမင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများကိုအဟောင်းတွေကလူအပေါ် armodafinil သုံးပြီးများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကန့်သတ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်မထားပါ။ သို့သော်သက်ကြီးရွယ်အိုများလူနာ armodaphine လက်ခံရရှိလူနာတွေအတွက်ထိုးညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်နိုင်ပါသည်သောခန္ဓာကိုယ်ကနေဒီမူးယစ်ဆေးဝါး၏နှေးကွေးဖယ်ရှားရေးနိုင်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်အတွက် armodafinyl ၏ခွဲခြား (C) သည်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုပြကြနှင့်လူ့ကိုယ်ဝန်မလုံလောက်သောလေ့လာမှုများရှိပါသည်။ အဘယ်သူမျှမတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများနှင့်လူ့ကိုယ်ဝန်မလုံလောက်သောလေ့လာမှုများရှိပါသည်ရှိပါတယ်။
interaction ကနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး interaction က
အချို့သောဆေးဝါးများအပြီးအပိုင်နားမှာဘက်မသုံးသင့်ပေပေမယ့်အခြားကိစ္စများတွင်နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောမူးယစ်ဆေးဝါးများသူတို့တစ်တွေမူးယစ်ဆေးအပြန်အလှန်ရှိလျှင်ပင်အတူတကွသုံးနိုင်တယ်။ နှင့်ဤအမှု၌, သင့်ဆရာဝန်ဆေးထိုး, ဒါမှမဟုတ်လိုအပ်သောဖြစ်မည်အကြောင်းသည်အခြားကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြောင်းလဲပစ်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ။ ဒီဆေးဝါးကိုယူပြီးသောအခါ, သငျသညျအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆေးမဆိုယူလျှင်သင့်ဆရာဝန်ကိုသိရန်အရေးကြီးပါသည်။ အောက်ပါ interaction ကသေချာပေါက် All-အားလုံးပါဝင်နိုင်မဟုတ်သောအရာကသူတို့ရဲ့အရေးပါမှုအလားအလာ၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အတူအပြန်အလှန်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါး Armodafinil အမှုန့်
အခြားအ interaction က
ဆေးဝါးနှင့်အစားအစာအချို့အမျိုးအစားများအကြားအပြန်အလှန်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့ကဆေးဝါးအစားအသောက်အချို့အမျိုးအစားများကိုအစာစားခြင်းသို့မဟုတ်အစာစားခြင်း၏အချိန်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဝှမ်းမသုံးသင့်ပေ။ အရက်သို့မဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုလည်းမူးယစ်ဆေး interaction ကဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။ အစားအစာသို့မဟုတ်အရက်နှင့်အတူဤဆေးဝါးအသုံးပြုမှု, ဒါမှမဟုတ်ဆေးရွက်ကြီးအဖြစ်ဆရာဝန်နှင့်အတူဆွေးနွေးပါ။
စီးပွားပျက်ကပ်ဒါမှမဟုတ်တစ်သမိုင်းရှိခြင်း, ဒါမှမဟုတ်သွေးတိုး, စွဲ, ဒါမှမဟုတ်စိတ္တ: သတိနဲ့ဆေးကိုအသုံးပြုပါ။ ဤအခြေအနေများပိုမိုဆိုးရွားဖြစ်လာပေမည်။
ventricular hypertrophy, ဒါမှမဟုတ် mitral valve ကဆြုံး left: ဤအခြေအနေများနှင့်အတူလူနာအတွက်အသုံးပြုမရသင့်တယ်။
အသည်းရောဂါများ (ပြင်းထန်): သတိနဲ့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေက၎င်း၏နှေးကွေးဖယ်ရှားရေးအထိတိုးတက်လာနိုင်ပါတယ်။
သင့်ဆရာဝန်များကညွှန်ကြားမှသာဒီဆေးဝါးကိုယူပါ။ မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သောက်သုံးသောတိုးမြှင့်မနေပါနဲ့, နှင့်မူးယစ်ဆေးယူတတ်၏အကြိမ်အရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ကြဘူး, နှင့်ဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်ထက်ပိုရှည်ထိုသို့မသုံးကြဘူး။
ဒါဟာဆေးပညာတစ်လူနာပြန်ကြားရေးသတင်းလွှာ (ပြည်တွင်းသတင်းလွှာ) နဲ့လာပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဤအချက်အလက်ဖတ်ရှုနားလည်ကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိပါကသင့်ဆရာဝန်ကိုမေးရန်သေချာစေပါ။
မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ကုထုံးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူ, ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးအချို့မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ မရပေမယ့်, ဤဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအပေါငျးတို့သဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါ, သင်တို့မူကားကျင့်ကိုကျင့်လျှင်, သင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုလိုအပ်ပါတယ်။
အရည်ကြည်ဖု, မီးရှို့ flaking, ခြောက်သွေ့, ဒါမှမဟုတ်အရေပြားအရှုံး
ယားယံခြင်း, ထုံ, ဒါမှမဟုတ် tingling အာရုံခံစားမှု
ယားယံခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ပြင်းထန်တဲ့နီခြင်း, ဒါမှမဟုတ်လိမ်ဖဲ့ခြင်း, ဒါမှမဟုတ်ရောင်ရမ်းအသားအရေ
ခြေထောက်, လက်မောင်း, လက်သို့မဟုတ်ခြေမတစ်ဦးကတုန်ခါ
ဤသည်ဆေးဝါးအလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရဖို့အရပျအစားမထိုးပါဘူး။ ဒါဟာဆေးပညာရောဂါ obsessive-compulsive ရောဂါ, (လည်းအသက်ရှူကျပ်ရောဂါခေါ်) ပိတ်ဆို့ခြင်းအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်, ဒါမှမဟုတ် psoriasis ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အိပ်စက်မှုပြဿနာများအဖြစ်ရောဂါမှသာလျှင်သုံးသင့်ပါတယ်။
ဒါဟာဆေးပညာ hypersensitivity နှင့်သွေးကြောဖောအပါအဝင်ဓာတ်မတည်၏လေးနက်သောအမျိုးအစားများ, ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ဒီဆေးဝါး အသုံးပြု. ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သင်အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာများမဆိုရှိပါကချက်ချင်းသင့်ဆရာဝန်နှင့်စစ်ဆေး: အနာ, ကွာ, အရေပြားကိုနူးညံ့ပြော့ပျောင်း, ချမ်းတုန်, ချောင်းဆိုးခြင်း, ဝမ်းလျှော, အဖျား, ဒါမှမဟုတ်ပူးတွဲသို့မဟုတ်ကြွက်သားနာကျင်မှု။ သို့မဟုတ်အနီရောင်အသားအရေကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့မဟုတ်လည်ချောင်းနာ; အနာစိမ်းဒါမှမဟုတ်ပါးစပ်သို့မဟုတ်နှုတ်ခမ်း၌အဖြူရောင်အစက်အပြောက်။ သို့မဟုတ်ပုံမှန်မဟုတ်သောပင်ပန်းနွမ်းနယ်သို့မဟုတ်အားနည်းခြင်း။
သငျသညျသတိပေးချက်မဟုတ်လျှင်အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်မအရာအားလုံးထက်လုပ်နေတာကိုရှောင်ရှား, စက်ပစ္စည်းမသုံးပါဘူး, ကားကိုမောင်း, ဒါကြောင့်သင်ဤဆေးကိုတုံ့ပြန်ရန်ဘယ်လိုသိမထားပါနဲ့။
ဒါဟာအချို့လူတွေကစိတ်တိုရစေစိတ်တို, သို့မဟုတ်အခြားပုံမှန်မဟုတ်သောအပြုအမူများဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အချို့လူတွေသတ်သေအတွေးများကိုဖြစ်ပေါ်စေသို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုစိတ်ဓာတ်ကျဖြစ်လာလေ့နိုင်ပါစေ။
မည်သည့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခြင်းမပြုမီ, သင်သည်ဤဆေးဝါးယူပြီးဖြစ်ကြောင်းတာဝန်ခံဆရာဝန်ပြောပြပါ။ အချို့စမ်းသပ်မှု၏ရလဒ်များကိုဒီဆေးဝါးကြောင့်ထိခိုက်နိုင်ပါသည်။
သင့်ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးမဟုတ်လျှင်သည်အခြားဆေးဝါးများမယူပါနှင့်။ ဒီအညွှန်းသို့မဟုတ် Non-ဆေးညွှန်းဆေးဝါးများ (OTCs), ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်ဗီတာမင်ပါဝင်သည်။
ကွာအပူ, စိုထိုင်းဆများနှင့်တိုက်ရိုက်အလင်းထဲက, အခန်းအပူချိန်မှာအလုံပိတ်ကွန်တိန်နာအတွက်ဆေးဝါးသိုလှောင်သိမ်းဆည်း။
3522 Views စာ
7 ၏စျေးကွက်အတွက် 2018 အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း 10 အကောင်းဆုံး-ရောင်းအားအလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု Powder ဖြည့်စွက်	-Phenylpiracet ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)